Ungazitholela Usizo | Impilo Yengqondo Texas
Ukuthola Usizo Lobungcweti
Ungakhuluma nodokotela wakho noma umhlinzeki wokunakekelwa okuyisisekelo ngempilo yakho yengqondo. Ukubabuza noma yimiphi imibuzo onayo kuyisiqalo esihle ekufuneni ukunakekelwa kobuchwepheshe ngezinkinga zempilo yengqondo. Udokotela wakho angabelana ngolwazi olujwayelekile, enze ukuhlolwa kokuqala, futhi akunikeze ukuthunyelwa kochwepheshe bezempilo yengqondo.
Thola umhlinzeki ngokwakho
Ungasebenzisa indawo yethu yokuthola uMhlinzeki.
Thola i-Local Mental Health noma i-Behavioral Health Authority endaweni yakho nge Iwebhusayithi yeTexas Health and Human Services, bese ufinyelela izinsizakalo.
ITexas Health and Human Services isebenza ngezwe eli-10 izibhedlela zabantu abanezinkinga zempilo yengqondo. Lezi zibhedlela zitholakala esifundazweni sonke.
Sesha indawo yangakini Ukusetshenziswa Kwezidakamizwa Isikhungo Sokudlulisa Ukuhlolwa Kokuhlola Ukufinyelela.
Uma unomshuwalense, zama ukushayela inombolo yesevisi yamakhasimende evame ukutholakala ngemuva kwekhadi. Imvamisa, banganikeza izinketho eziningi eziseduze ngokuya ngekhodi lakho le-zip.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi abanye abahlinzeki bangaba nohlu lokulinda. Uma uhlangabezana nalokhu oseshweni lokuthola umhlinzeki, ungathenga abanye abahlinzeki, usebenzise ukuzinakekela ngenkathi ulinde izinsuku zokuqokwa, futhi okubaluleke kakhulu, ungalilahli ithemba oseshweni lwakho lokuthola usizo.
Izinsizakusebenza Zikahulumeni Nezikahulumeni kanye Nezinhlangano Zobuchwepheshe
Kukhona nezinsizakusebenza zombuso nezikahulumeni ezenzelwe ukukusiza ekutholeni abahlinzeki bokunakekelwa kwezempilo nezinsizakalo eziphansi. Ezinye izinsiza zombuso zifaka:
ITexas Health and Human Services (HHS)
I-HHS inikela ngezinsizakalo zempilo yezengqondo nezokusetshenziswa kwezidakamizwa emindenini nakubantu bayo yonke iminyaka.
Ukuphathwa Kwezidakamizwa Nokuphathwa Kwezinsizakalo Zempilo Yengqondo (SAMHSA)
Ngemininingwane ejwayelekile ngempilo yengqondo nokuthola izinsizakalo zokwelashwa endaweni yakho, shayela Inombolo yosizo ye-SAMHSA Treatment Referral Help kule nombolo 1-800-662-USIZO (4357). I-SAMHSA nayo ine- Indawo Yokuthola Ukwelashwa Kwezempilo kuwebhusayithi yayo engaseshwa ngendawo.
INational Alliance on Mental Illness (NAMI)
I-NAMI ihlinzeka ngokugqugquzela, imfundo, ukwesekwa kanye nokuqwashisa umphakathi ngabantu ngabanye nabathandekayo abathintekayo ngokugula kwengqondo.
IMental Health America (MHA)
I-MHA yinhlangano engenzi nzuzo eyenzelwe umphakathi ezinikele ekubhekaneni nezidingo zalabo abaphila nokugula ngengqondo futhi ithuthukise impilo yengqondo yabo bonke abantu baseMelika.
Uma okwamanje ubhekene nenkinga, sicela ufune usizo ngokushesha! Ungashayela noma ubhalele umugqa wenkinga wama-24hr ku- 1-800-273-KHULUMA (8255) noma usebenzise enye yalezi zinsizakalo zesimo esibucayi:
Shayela u-2-1-1 , inketho 8
Inombolo Yesimo Senkinga Yezempilo Yengqondo Yasekhaya noma Yokuziphatha
Thola i-LMHA yangakini bese ushayela ulayini wabo wenkinga.
Inqubo Kazwelonke Yokuvimbela Ukuzibulala
Shayela 1-800-273-KHULUMA (8255);
Uma ungumakadebona, cindezela u-1.
I-Lifeline iyinombolo yocingo yamahhala, eyimfihlo yezinhlekelele etholakala kuwo wonke umuntu 24/7. ILifeline ixhuma abafonayo esikhungweni esibucayi esiseduze kunethiwekhi kazwelonke yeLifeline. Lezi zikhungo zinikeza ukwelulekwa ngezinkinga kanye nokudluliselwa kwezempilo yezengqondo. Abantu abangezwa, abangezwa kahle, noma abangezwa kahle bangaxhumana ne-Lifeline nge-TTY ku 1-800-799-4889.
Ulayini Wombhalo Wenkinga
Thumela umbhalo othi “Sawubona” ku 741741
Ucingo olushaywayo lwe-Crisis Text luyatholakala ngomhlaka-24/7. ICrisis Text Line isebenza noma ngubani, kunoma yiluphi uhlobo lwenkinga, ebaxhumanisa nomeluleki wesimo esibucayi onganikeza ukusekelwa nolwazi.
Umugqa Wenkinga Yezilwane
Shayela 1-800-273-KHULUMA (8255) bese ucindezela u-1
noma uthumele umbhalo ku 838255
IVeterans Crisis Line ingumthombo wamahhala, oyimfihlo oxhuma omakadebona amahora angama-24 ngosuku, izinsuku eziyisikhombisa ngesonto nomphenduli oqeqeshiwe. Isevisi iyatholakala kubo bonke omakadebona, noma ngabe ababhalisiwe ne-VA noma babhaliswe ekunakekelweni kwezempilo kwe-VA. Abantu abangezwa, abangezwa kahle, noma abangezwa kahle bangashayela 1-800-799-4889.
Iphrojekthi yeTrevor – Usizo Lokuzibulala LGBTQ
Vakashela isayithi noma ushayele 866-488-7386
Thumela umbhalo othi “QALA” ku 678780 noma uxoxe online.
Sebenzisa yethu Thola ithuluzi loMhlinzeki ukuthola abahlinzeki bezinsizakalo zezempilo yengqondo nokuziphatha.
Ukunquma ukuthi ngabe uMhlinzeki Wokwelapha noma Impilo Yengqondo
Ukwelashwa kusebenza kahle kakhulu uma unobudlelwano obuhle nomhlinzeki wakho wezempilo yengqondo. Kodwa-ke, ukuzama ukuthola ukuthi ngabe umuntu ukulungele kahle yini ngaphambi kokuqokwa kokuqala kungaba yinkohliso. Kuyasiza ukuba nohlu lwemibuzo olulungele abahlinzeki bezempilo yengqondo ukuze bakunikeze umbono wokuthi bakulungele noma cha. Ukuba nemibuzo elungiselelwe nakho kungakunika ulwazi mayelana nokukhokha, njll. Eminye imibuzo ewusizo ifaka phakathi:
Ngabe unolwazi lokuphatha umuntu ngezinkinga zami? Uma kunjalo, yini / kangakanani isipiliyoni?
Uyini indlela yakho yokuphatha umuntu ngezinkinga zami?
Lolu hlobo lokwelashwa luhlala isikhathi esingakanani?
Imuphi umshwalense owamukelayo?
Ingabe unikela ngesikali sokukhokha esishelelayo?
Yini imali yakho?
INational Institute of Mental Health (NIMH) inephepha lamaqiniso lamahhala elingasiza futhi: Ukulawula Impilo Yakho Yengqondo: Amathiphu Okukhuluma Nomhlinzeki Wokunakekelwa Kwezempilo
Okwethu Ikhasi Lezempilo Yengqondo futhi izinsiza nikeza imininingwane emikhulu nezixhumanisi ezinsizakalweni zamahhala ongazibhekabheka.
Ngeminye imininingwane nezinsizakusebenza:
Imininingwane ye-MHA nezinsizakusebenza zokuzinakekela kahle.